﻿ ​‘एक पटक टिभीएस चढेपछि अरु चढ्न मन लाग्दैन’
टिभीएस ब्राण्डका केही मोडेलहरु निकै चल्तिमा छन् । अपाचे सबैभन्दा चलेको मोडल हो । अरु मोडलहरु पनि अन्य ब्राण्डका त्यही स्तरका बाइकभन्दा निकै स्तरीय रहेको कम्पनिको दावी छ ।
सोमबार इनरुवामा टिभीएसको बिक्रेता ग्रिधर इन्टरप्राइजेजको उद्घाटन कार्यक्रममा आएका जगदम्बा मोटर कम्पनिका बिजनेस डेभलपमेन्ट असिस्टेन्ट मेनेजर मोहन उप्रेतीसँग टिभीएस ब्राण्डका बारेमा न्यूजलयले गरेको कुराकानी :
टिभीएसले आक्रामक शाखा विस्तार रणनीति लिएको देखिन्छ, कति वटा शाखा छन् देशभरमा ?
८५ वटा शाखा छन् । दशैंपछि अरु थपिएर हामी सय वटा बनाउँदैछौं । ग्राहक सेवाको लागि एक सय वटा सीएसपी नेटवर्क छन् ।
शाखामा ग्राहकहरुले के–के सुविधा पाउँछन् ?
पहिलो सेल्स हो, दोस्रो सर्भिस हो । त्यस्तै स्पेयर्स पार्टस् पाउनुहुन्छ । पाँच वर्षको ६० हजार किलोमिटर वारेन्टी सबै पाउनुहुन्छ ।
बजारमा विभिन्न ब्राण्डका बाइक छन्, टिभीएस नै किन किन्ने ?
टिभीएसले यस्तो फिचर ल्याउँछ कि त्यो अरु कसैले ल्याउँदैन । हामी पहिलो क्वालिटीमा ध्यान दिन्छौं, दोस्रो हाम्रो फिचर्स बढी छ । अरुसँग नभएको फिचर टिभीएससँग छ । अस्ती भर्खरै पनि नाडामा हामीले अपाचे आर आर ३१० मोटरसाइकल र १२५ एनटर्क स्कुटर लन्च गरेका थियौं । स्कुटरमा लोकेसन नेभिगेसन रहेको छ । जिपीएस सिस्टम कन्सुल डिभाइस हो । जसमा २०० ४भी अपाचेमा पनि गियर सिस्टम छ क्वालीटिमा अलि फरक छौं । खासगरी हाम्रा बाइकमा स्लीपर क्लज छन् । त्यसैले टिभीएसको बाइक निकै लोकप्रिय छन् ।
टिभिएसका प्रतिष्पर्धीहरु पल्सर, साइनहरु छन् । ती बाइकलाई उछिन्ने कुन बाइक छन् ?
स्ट्राइकर १२५ बाइक हिरोको सुपर स्प्लेन्डरभन्दा राम्रो फिचरमा र त्योभन्दा सस्तो बाइक छ । बजाजको डिस्कभरभन्दा राम्रो छ । पल्सर, साइनहरुभन्दा त्यही मूल्यमा स्पोर्टी र स्तरीय बाइकहरुसमेत हामीसँग छन् ।
स्पेयर्स पार्टस्को समस्या होला नि टिभीएसको ?
महँगो हुन्छ र पाइँदैन भन्ने गुनासो थियो कुनै समय । टिभिएस क्वालिटिमा ध्यान दिन्छ । रनिङ आइटममा हामी प्रायः सस्तो छौं । केहीमा महँगो होला । तर जति सामान पाउँछ, त्यती चाहिँ ओरिजिनल हुन्छ । अरु कम्पनिको स्पेयर्स पार्टस् तीन पटक फेर्दा हाम्रो एक पटक फेर्दा हुन्छ । पहिले यस्तो हल्ला फैलाइएको थियो, तर अहिले त्यो छैन । त्यसमाथि ठाउँ ठाउँमा शोरुमहरु खुलिरहेका छन्, अब ढुक्कले टिभीएस प्रयोग गर्दा हुन्छ ।
अन्तीममा ग्राहकहरुलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ ?
टिभीएस बाइक पारिवारिक बाइक हो । सबैको लागि आफ्ना आफ्नै फिचर्सका बाइकहरु छन् । युवाहरुलाई लक्षित गरेर निकै स्पोर्टी र स्तरीय बाइकहरुसमेत छन् । एक पटक टिभीएस बाइकको विषयमा बुझिदिनुहुन र किनेर हेरिदिन अनुरोध छ । तपाइले एक पटक टिभीएसको मोटरसाइकल किन्नुभयो भने जिन्दगीभर अरु चढ्न मन लाग्दैन ।